Xiddiga Chelsea Isku Muujinaya Ee Abraham Oo Magacaabay AFARTA Weeraryahan Ee Uu Muuqaaladooda Daawado & Saddex Kamida Oo Premier League Ka Ciyaara. - Gool24.Net
Xiddiga Chelsea Isku Muujinaya Ee Abraham Oo Magacaabay AFARTA Weeraryahan Ee Uu Muuqaaladooda Daawado & Saddex Kamida Oo Premier League Ka Ciyaara.
November 27, 2019 Apdihakem Omer Adem
Weeraryahanka qaabka cajiibka ah xilli ciyaareedkan uga soo dhalaalaya kooxda Chelsea ee Tammy Abraham ayaa kahor kulanka muhiimada weyn u leh ee Champions League ee Valencia shaaca ka qaaday tiraba afar weeraryahan oo uu wax ka barto.
Chelsea ayaa caawa booqanaysa kooxda lugtii hore garoonkeeda kusoo garaacday ee Valencia iyaga oo ogsoon in natiijada kasoo baxda kulankaasi ay saamayn weyn ku yeelan doonto haddii ay u gudbayaan wareega xiga ee 16-ka.
Qaabka kulankaas loogu soo kala bixi karo wareega 16-ka ayaa ah in labada kooxood midii guuleysataaba ay wareega xiga ee tartanka iska xaadirin doonto taas oo cadaadis ku ah labada dhinacba.
Iyadoo ay sidaas tahay ayuu ugu horreynba Tammy kulankan ku sifeeyay midka ugu muhiimsan ilaa haatan waayihiisa ciyaareed isagoo dhinaca kale xusay in kulankan ay dareemayaan masuuliyad ka badan midii lugtii hore.
Abraham ayaa yidhi “Sidaas ayaan odhan lahaa hubaashii (Inuu yahay kulankiisii ugu muhiimsanaa) sidaas ayaan odhan lahaa”.
“Kahor kulankii ugu horreeyay ee aanu Valencia wajahnay Mason (Mount), Fikayo (Tomori) iyo anigu si wada-jir ah ayaanu kulanka iskugu diyaarinaynay anigu maan dareemayn dhab wakhtigaas inaaanu dhammaantayo Champions League ku jirno”.
Abraham oo xusaya afarta weeraryahan ee uu wax ka barto ayaa sheegay inay kala yihiin midka Man City ee Sergio Aguero dhigiisa Tottenham ee Harry Kane, Roberto Firmino oo Liverpool ka tirsan iyo mashiinka Bayern Munich ee Robert Lewandowski.
“Waxaan in badan daawadaa Harry Kane, Aguero, Firmino iyagu waa weeraryahano Premier League ah laakiin sidoo kale waxa jira rag sida Lewandowski oo kale ah iyo dhammaan noocyada ciyaartoyda ah ee tartankan hore uga ciyaaray”.
error: Ogolaansho La\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_'aan lama Copy-garaysan Karo